WARBIXIN SHEEGAYSA IN AJAANIB JIHAAD DOON AHI KU QULQULAYAAN SOMALIYA | Toggaherer's Weblog
WAR DEG DEG AH:QARAX XOOGAN OO GILIGILAY BADHTAMAHA GAROOWE
WARBIXIN SHEEGAYSA IN AJAANIB JIHAAD DOON AHI KU QULQULAYAAN SOMALIYA
Warbixin lagu qoray wargeyska The Times ee ka soo baxa dalka Ingiriiska looguna magac daray ” Dagaalyahanno Ajnabiga ah oo ku qul qulaya Somalia” ayaa lagu falanqeyey qaabka iyo cadada ajaanibka jihaad doonka ah ee ku sugan Somalia.
Jariirada ayaa ku bilowday warbixinteeda “kadib dheeri gelin ka timid Osama bin Laden iyo bixiddii ciidamada Itoobiya ey ka baxay Somalia ayaa waxaa ku qulqulayey bilhii la soo dhaafay Somalia dagaalyahanno ajnabi ah oo jihaad doon ah kuwaasoo ku biiray ciidamo dadka degaanka ah iyagoo laga baqayo iney u rogaan Somalia meel hoy u ah ururka Alqaacidda.
Jariirada ayaa tidhi.
*Wasiiraka arrimaha gudaha ee Somalia ayaa lagu dhaawacay qarax.
* Bin- Laden oo afgambi ku baaqay
*Islaamiyiinta oo wacad ku maray iney gacanta ku wada dhigaan Somalia oo dhan.
Jariirada ayaa tidhi waxaa haatan jooga Somalia illaa iyo 450 Ajaanib ah oo la shaqeeya alshabaab oo illaa 2006 dagaal ka waday Somalia.
Markii hore Somalia waxaa joogay illaa iyo 100 dagaal yahay laakiin sanadka 2009 waxey cadadoodu gaadhay 450” sidaassina waxaa yidhi Ismaaciil Xaaji Nuur oo ahaan jiray ciidamada Sirta ee Somalia ayey qortay jariiradu.
Ninkan Ismaaciil Nuur ey ku magacowday jariiradu ayaa intaasi ku daray iney raggan jihaad doonka ah ey ka yimaadaan Mareykanka, Yurub iyo Bariga dhexe waxeyna ka soo galaan wadanka Somaliland waa sida hadalka loo qoraye. Wuxuu sheegay Ismaaciil iney ku badan yihiin raggan jihad doonka ah Magaalooyinka Garowe, Baydhabo, Marko iyo kismaayo.
Nin diblomaasi ah oo Nairobi jooga ayaa u sheegay jariirada “ Khatarta ka soo socda waa mid aanan dhayalsaneyn waxaana laga baqayaa iney howlahooda ka fuliyaan meelo ama wadamo ka baxsan Somalia”
Jariirada ayaa tidhi bilihii la soo dhaafay ayaa waxaa la dareemayaa in alshabaab ku sii dhowaadeen ururka Alqaacida sida ey sheegeen ciidamada sirta ee reer galbeedka.
Alshabaab oo ey u taliyaan gole (cabinet) ka kooban toban nin oo badan kood ku soo tababartay Afgistaan ayaa waxaa kamid ah Mukhtaar Roobow oo afhayen u ah ayaa lagu qoray jariirada.
Waxaa sidoo kale la aaminsan yahay bey tidhi jariirada iney golaha kamid yihiin rag dhowr ah oo ajnabi ah oo ka kala yimid Sacudi Carabiya iyo Suudan iyo Fazul Abdullah oo ku dhashay Camora kaas oo loo heysto qaraxa dadku ku dhinteen ee ka dhacay Nairobi 1998.
“Waxey bartilmaameedsanayaan Kenya, Djabuuti iyo Ethiopia laakiin dowladaha reer galbeedku waxey ilaalin doonaan wadamadaas iyagoo aan dan ka geleyn Somalia” ayuu u sheegay jariirada Ismaaciil Nuur.
Dhowaan ayey ahayd markii Osaama bin laden uu fariin uu ugu magac daray “Horyaalka Somalia” u diray alshabaab isagoo ku guubaabiyey iney ridaan dowlada Sh. Shariif oo ah hogaamiyaha qonyar socodka ah ee Somalia ayaa lagu yidhi qoraalka.
“Qof kasta waa ogyahay iney kamid yihiin Alshabaab dagaal yahanno ajnabi ah waxeyna na gula dagaaleen Bay iyo Bakool” ayuu yidhi Col. Adan Abdullahi oo kamid saraakiisha dowlada ee kula dagaala Alshabaab gobolada koonfureed.
“Wiil yar oo ila hadlay ayaa ii sheegay inuu yahay Marookaan laakiin ninka Amiirka u ah waa nin caddaan ah oo mareykanka ah” sidaasi waxaa yidhi nin dukaanle ah oo diiday magaciisa la sheego.
Dadka degaanka ayaa sheegay in rag badan oo caddaan ah ey kamid yihiin alshabaabka kuwaasoo dhowaan soo gaadhay Baydhabo oo u jirta magaalada Muqdisho 250 KM taas oo ahaan jirtay fadhigii barlammaanka Somalia ayaa lagu sheegay jariirada.
“Raggan caddaanka ah aad bey u hubeysan yihiin waxey wataan garaneylo iyo qoryaha darandooriga u dhaca mararka qaarna masaajidka ayey noogu yimaadaan oo ey nagula Tukadaan” sidaasi waxaa yidhi Axmad Xassan oo dadka degaanka Baydhabo ah.
“Wey ka dishibiliin fiican yihiin ciidamada degaanka waana dad diinta aad ugu dhegan laakiin ma aqaan waxa ey halkaan u joogaan sababtoo ah halkaan jihad ka ma jiro hadda Itoobiyaakina waa tageen” ayuu yidhi Maxamed oo ah 28 jir dadka degaanka ah.
Mid kamid ah sawiradda dadka shahiiday oo laga arkayo websiteka alshabaab waxaa ka mid ah nin lagu magacaabay “Abu Horriya” oo loola jeedo aabihii xoreynta wuxuuna ahaa Mareykan asalkiisu yahay Hisbanic loona aqooni jiray Seatle Barber”( timajarihii Seatle) waxaana lagu dilay Somalia 2008dii ayaa lagu daabacay jariirada.
Magaciisa runta ahi waa Ruben Shumpert waxaana hadda ka hor loo xidhay hub iyo sameyn falsafakeyn waxaana sidoo kale loo heystay inuu tusey caruur Cajalado dagaal doon ah tima jarihiisa uu ku lahaa Seatle.
Wakhti dhaw ayey ahayd markii dowlada Mareykanka walaac ka muujisay dhalinyaro Somali ah oo la waayey iyadoo loo maleynayo in loo qoray askar si ey uga dagaalamaan Somalia waxeyna badanaa dhalintaasi ka yimideen Magaalada Minneapolis ee cariga mareykanka
Sidoo kale dowlada Britain, oo ey deggan yihiin jaaliyad farabadan oo Somali ah ayaa dhowaan soo bandhigtay qorshe looga digayo halista ka iman karta arrintaas kadib markii uu soo batay dhaq dhaqaaq Alqaacidda ka wado Somalia ayaa lagu soo geba gebeeyey Warbixintan laga qoray Somalia.